Church Harvest Church - WRSP
AKWELKWỌ AKW .KWỌ AKWVKWỌ CITY (CHC)
1989: Site n'enyemaka nke ndị ntorobịa iri abụọ, Kong Hee guzobere ọgbakọ ọhụrụ na May 7 na Peace Center, Singapore.
1992: E guzobere City Harvest Church (CHC) dị ka ọha mmadụ.
1994: traininglọ akwụkwọ ọzụzụ nke CHC, Schoollọ Akwụkwọ nke Theology (nke a na-akpọbu City Harvest Bible Training Center), bidoro.
1995: CHC malitere ijide ọrụ ya na Hollywood aterlọ ihe nkiri gara aga wee gaa ebe ahụ ruo afọ isii ọzọ.
1996: Kong Hee na nwunye ya, Sun Ho (Ho bụ aha ikpeazụ), malitere Church Without Walls, ọrụ ọrụ obodo.
1996: Ho hibere ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ, City Harvest Community Services Association.
2001: Chọọchị ahụ wuru ụlọ chọọchị na Jurong West Street 91 wee banye ebe mbụ ya na-adịgide adịgide.
2001: Chọọchị ahụ kwuru na ha nwere 10,310 ndị bịara ya na ọrụ izu ụka iri na ise ya. O nwekwara ụlọ ọrụ na ụlọ akwụkwọ na ebe ise dị iche iche.
2002: churchka malitere "Crossover Project," na-achọ iru ụwa site na egwu Ho.
2002: Chọọchị ahụ kwadoro ntọala nke City College, ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze kwadoro inye ndị ọzọ ọzụzụ maka agụmakwụkwọ ọzọ.
2003: akpọrọ Ho “Onye Kachasị Ntorobịa nke ”wa” maka mbọ enyemaka ya.
2004: Akpọrọ Ho “Onye nnọchi anya Lovehụnanya” maka ụmụaka na ntorobịa ntọala nke China.
2005: Kong wepụrụ onwe ya site na ndị na-akwụ ụgwọ ọrụ wee malite ijere ụka ozi dị ka onye nchoputa na-asọpụrụ / onye isi ụkọchukwu.
2005: Ka ụka ahụ toro, CHC gbazitere saịtị ofufe ọzọ na Singapore Expo maka ọrụ izu ụka Bekee.
2006: CHC malitere O School, ụlọ akwụkwọ a na-akụzi ịgba egwu n'okporo ámá maka ndị na-eto eto.
2008: CHC malitere ọnụ ụzọ akụkọ Ndị Kraịst, City News.
2009: CHC kwuru na ya nwere ọgbakọ 23,565.
2010: CHC mara ọkwa na ọ zụtala oke osisi na Suntec Convention Center, nke dị na Central Business District, nke ọ ga-eji maka ọrụ ụka ya.
2010: CHC kwuru na ha nwere nkezi nke 23,256 na ụka iri anọ na asaa na ụlọ akwụkwọ isii na Asia.
2010: Mmadụ iri na isii jikọrọ aka na CHC, gụnyere Kong na Ho, ndị uwe ojii Singapore nyochara maka ịgha ụgha na akaụntụ na mmebi iwu ntụkwasị obi.
2011: CHC kwagara na Suntec Convention Center wee kwuo na ya nwere ọgbakọ 20, 619.
2012: CHC kọrọ ọgbakọ nke 19,819. Enwekwara ụmụ akwụkwọ 5,937 sitere na opekata mpe mba iri atọ gụsịrị akwụkwọ na ngalaba ọzụzụ ya.
2012: E jidere Kong na ndị isi ụka ise ndị ọzọ ma bo ha ebubo na ha na-eji ego eme ihe.
2012: Ho duuru njikwa na njikwa ọhụrụ, nke na-arụ ọrụ ụka. Ọ malitere ọhụụ ụka ọhụụ, nke a na-akpọ CHC 2.0, nke Kong guzobere.
2013 (Mee): Ikpe malitere; ọ gara n'ihu ihe karịrị afọ abụọ.
2013: CHC kwuru ọgbakọ nke 18,192.
2014: CHC kwuru ọgbakọ nke 17,522.
2015: A mara Kong na ndị isi ụka ise ọzọ ikpe ụgha nke akụkọ na mpụ ntụkwasị obi ntụkwasị obi. A nabatara Kong na mkpọrọ afọ asatọ, ikpe kachasị njọ n'etiti mmadụ isii ndị eboro ebubo.
2015: A họpụtara Ho n'oge emume ncheta afọ iri abụọ na isii nke CHC wee bụrụ onye isi ụka.
2015: CHC kwuru ọgbakọ nke 16, 482.
2018 (February): Courtlọikpe Mkpegharị Mkpebi kwadoro mkpebi nke Courtlọikpe Kasị Elu ịkatọ ndị isi ụka nke mmebi iwu dị njọ nke ebubo ntụkwasị obi.
2019 (August 22): A tọhapụrụ Kong na nga mgbe ọ gachara afọ abụọ na ọnwa anọ nke mkpọrọ afọ atọ na ọkara.
Kong Hee [Foto dị n'aka nri] mụrụ na August 23, 1964, na Singapore. Ọ bụ nwa nke ise nke Kong Leng, onye injinia, na Toh Poh-Eng, a ohia ahia. Ọ gụsịrị akwụkwọ na kọleji na sayensị sayensị na Mahadum Mba nke Singapore na 1988. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, ọ rụrụ ọrụ nwa oge na ụlọ obibi akwụkwọ mpaghara. Na 1989, Kong ghọrọ onye mgbasa ozi mkpara na Christ for Asia, nzukọ ozi dị na Philippines. Mgbe ohere maka Kong ịsụ ụzọ chọọchị ọhụrụ na Singapore bilitere, Kong laghachi Singapore wee nyere aka guzobe ọgbakọ ọhụrụ nke ndị ntorobịa iri abụọ, site na nkwado na agbamume nke ụfọdụ ndị ụkọchukwu nọ na Singapore. Na May 7, 1989, e guzobere Church Harvest Church dị ka ngalaba (nke a maara dị ka Ekklesia Ministry) nke Bethany Christian Center (Nzukọ nke Chineke).
E hiwere ụlọ ụka ahụ dịka ọha mmadụ na 1992 wee deba aha ya n'okpuru Iwu Ọha na October 16, 1993. Na 1994, na ebumnuche nke ịzụ ndị ụkọchukwu, ndị ozi ala ọzọ, na ndị ọrụ ụka na Asia, ụka malitere ụlọ akwụkwọ ọzụzụ nke ya, ndị Lọ akwụkwọ nke Theology. Ruo afọ isii site na 1995, ụlọ ụka ahụ gbazitere ụlọ ihe nkiri Hollywood mbụ na Tanjong Katong Road wee nwee ọrụ ya n'ebe ahụ. Na 2001, ọ kwagara na ebe na-adịgide adịgide na Jurong West Street 91. Thelọ oche 2,200, ụlọ ụka titanium na-ekpuchi, nke na-efu S $ 48,000,000, bụ otu n'ime ụlọ ụka kachasị ukwuu na Singapore. Na 2005, ka ụka ahụ na-etolite, ọ gbazitere saịtị ofufe ọzọ na Singapore Expo maka ọgbakọ Bekee nke izu ụka ya. Na Machị 6, 2010, ụka kwupụtara na ya azụọla oke osisi na Suntec Convention Center, nke dị n'etiti mpaghara azụmahịa nke Singapore, ọ ga-ejikwa ụlọ ọrụ ndị a maka ọrụ ụka ya.
Nwunye Kong, Ho Yeow Sun (nke a maara dị ka Sun Ho), bụ (ma ọ bụ karịa) na-ewu ewu ma dị mkpa na mmepe nke CHC dị ka Kong. A mụrụ Ho na June 2, 1972 na Singapore. [Foto dị n'aka nri] Di na nwunye ahụ lụrụ na 1992 na Ho banyere na chọọchị ahụ site na mmalite ya. Ọ bụ otu n'ime ndị ndu ndị ntorobịa nyeere Kong aka guzobe ụka CHC. O jere ozi dị ka onye ntụzi aka nke ọrụ enyemaka nke ụka ahụ ma duru Ngalaba Mepụta ya site na 1992 ruo na mbubreyo 2000. Na 2004, na kwanyere onyinye ya nye maka iwulite na ịkwalite ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na China, a kpọrọ Sun aha “Onye nnọchi anya nke Hụnanya ”nke Children and Youth Foundation nke China.
Mgbe Kong na Ho bidoro ịkwalite echiche nke "Cultural Mandate" na CHC na 2002, nke gbara ndị ụka ụka ahụ ume ka ha na-eme nke ọma n'ahịa, ha malitere Project Crossover iji gosipụta ọchịchọ ha iru ụwa. Site na nkwado Kong, Ho gbara arụkwaghịm n'ọkwá ụka ya wee malite ọrụ abụ. Dị ka Kong si kwuo, atụmatụ ahụ bụ na Ho ga-abanye n'ahịa egwu dịka akụkụ nke mgbalị ụka iji mee nkwusa site na egwu pop ya (Miller 2014). Site n'ire ihe kariri 50,000 nke akwukwo mbu ya nke Mandarin pop, Anyanwụ na Lovehụnanya, nke sochiri egwuregwu abụọ erere na Singapore Indoor Stadium na June 2002, Ho nwere ohere iji kwalite ọrụ ya na mpụga Singapore, na Taiwan na China. Na 2003, ọ kwagara Hollywood iji chụsoo ọrụ ịbụ abụ ya. Ho afọ asaa na US bụ afọ mara mma maka ya. Akụkọ banyere obodo na akụkọ ụka gosiri na ọ natara nkuzi nzuzo nke ndị na-eme ihe nkiri na-arụ ọrụ na ndị na-ese ihe nkiri, ndị isi, na ndị na-emepụta ihe na US na vidiyo vidiyo ya. Ho rụrụ ọrụ na onye na-emepụta ihe ndekọ akụkọ na oge iri na isii Grammy Award onye mmeri David Foster, onye nyeere aka wepụta onye izizi Bekee, Ebee Ka Lovehụnanya Gara. Egwu ahụ ruru ebe dị elu na chaatị ịgba egwu Billboard (Sen 2015).
Ka o sina dị, n'oge nile ọ na-egwu egwu, o nwetara nkatọ siri ike. Nkwuwa okwu ya n’ịchọ ihe ọhụrụ nwetara nzaghachi dị egwu, n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị ụka ya fee ya ofufe. Dịka otu n'ime akụkọ dị na akwụkwọ akụkọ ụka nke ụka na-akọwa ya:
Site na ogwe osisi na-acha odo odo na-eme ka uwe ya dị nro brown yana ya J-Lo mana ọ bụghị dị ka uwe na-ekpughe… emebiela nkọwa niile akọwapụtara nwere ike inwe maka ihe ụkọchukwu 'kwesịrị' ịdị (Oge Owuwe Ihe Ubi, v.17 Machị-June 2002).
Ma enwekwara ọtụtụ ndị ọrụ ya dị ka nke a na-emegiderịta onwe ya dị ka "onye ụkọchukwu-abụ abụ". Otu n'ime ihe atụ kachasị ama bụ "Wine China," abụ nke gosipụtara ya dị ka onye China na-agba egwu na Jamaica, yana "Maazị. Bill, ”bụ nke ọ na-abụ banyere igbu di ya. Na ihe nkiri China Wine ọ "na-eji iwe na-egwu egwu na egwu na obere ala, midriff-baring top na ọ dịghị ihe mkpụmkpụ" (Miller 2014). Dabere na akụkọ ahụ, "… ụjọ, ịkwa emo na nlelị bụ mmeghachi omume bụ isi [n'ebe MTV ya nọ]; ka ha jiri nwayọọ, gbagwojuru anya ma nwee obi abụọ banyere otú ụdị egwu a ga-esi nye aka gbasaa ozi ọma. ”
Ọzọkwa, kemgbe mmalite nke ọrụ ya, a katọrọ Ho na ọ na-eji nkwado nke ụka ya nyere ya aka ire ahịa ọba ya. A na-akọ asịrị na ọ bụ Kong na-arụ ọrụ ma na-akwado ya maka mbibi nke obodo na nke ụwa yana na ndị isi ụka na-eji akụnụba ụka. Ajujula ajuju banyere okwesiri nke uka iji kwado oru ndi ozo site na, ihe ndi ozo, na akuko akuko ya na ulo uka ma obu na akwukwo uka ma choro ka ndi otu uka zuta CD ya tinyere isonye na egwu ya. Ọtụtụ mmadụ weliri nkuanya anya mgbe ọ gosipụtara ụzọ ndụ okomoko ya na Hollywood. Dabere na Akwụkwọ Ọhụrụ, Ho gbazitere ụlọ obibi nke Hollywood Hills maka $ 20,000 kwa ọnwa. Rịba ama na ihe onwunwe ahụ ruru $ 5,600,000.
Ọrụ abụ Ho kwụsịrị na 2010 mgbe ndị uwe ojii malitere nyocha n'ime ndị isi ụka iri na isii, gụnyere Kong na Ho, banyere iji ego eme ihe n'ụzọ na-adịghị mma na CHC. Site na njide 2012 na ikpe malitere na 2013, e nwere ebubo na Kong na ndị isi ụka ise ndị ọzọ na-akwado ego ọrụ Ho na-abụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị wee jiri $ 26,000,000 Singapore ọzọ kpuchie ya. Akụkọ gosikwara na ihe ịga nke ọma ya n'ahịa asụsụ Mandarin na-ekwubiga okwu ókè dị ka akwụkwọ egwu Mandarin abụọ ya nwere nnukwu ọghọm, ndị otu ụka ga-azụkwa akwụkwọ 32,500 nke album ya a na-ereghị (Sen 2015).
Ikpe a kwụsịrị ọrụ ya mana ọ bụghị onye ndu ya na CHC. N’abalị iri abụọ na otu n’ọnwa Ọktoba afọ 21, a mara Kong na ndị isi ise ndị ọzọ ikpe ebubo niile. Twobọchị abụọ tupu mkpebi a apụta na Ọkt 2015, 19, Kong dere na Facebook na e chiri Sun Ho ịbụ pastọ. O nweghị onye e boro ebubo ọ bụla ma ugbu a dochie di ya dịka onye isi ụka.
City Harvest Church's Essential Doctrines bụ okwu iri na asaa sitere na Baịbụl nke bụ
1. Anyị kwenyere na mmụọ nsọ zuru oke nke akwụkwọ ikike akwadoro nke akwụkwọ nsọ dịka enyere ya na mbụ. Akwụkwọ Nsọ enweghị ndejọ, enweghị ntụkwasị obi na kwa ikike zuru oke maka ihe niile gbasara okwukwe na akparamagwa (2 Timoti 3:16; 1 Ndị Kọrịnt 2:13).
2. Anyị kwenyere na Chineke ebighi ebi onye gosipụtara onwe ya dị ka otu Chineke nke dị n'ime mmadụ atọ, Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ, ndị na-enweghị ike ịkọwapụta mana enweghị nkewa (Matiu 28:19; 2 Ndị Kọrịnt 13:14).
3. Anyị kwenyere na okike, nnwale na ọdịda mmadụ dị ka edere ya na Jenesis; mmebi iwu nke mmụọ ya na enweghị ike iru ezi omume Chineke (Ndị Rom 5:12, 18).
4. Anyị kwere n'Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Onye Nzọpụta nke mmadụ, nke Mmụọ Nsọ tụụrụ ime ya, onye Meri na-amaghị nwoke mụrụ, Chineke na nwoke dị ukwuu (Luk 1: 26-35; Jọn 1: 14-18; Aịsaịa 7: 14 9; 6: XNUMX).
5. Anyị kwenyere na Kraist nwụrụ maka mmehie anyị, e lie ya ma bilie ọzọ n'ụbọchị nke atọ, wee mee ka ndị na-eso ụzọ Ya pụta n'onwe ya (1 Ndị Kọrịnt 15: 1-4; Ndị Rom 4:25).
6. Anyị kwenyere na nrịgo Jizọs rịgoro n'anụ ahụ n'eluigwe, mbuli elu Ya na nke Ya, na-abịa n'ụzọ nkịtị nke ugboro abụọ maka Nzukọ Ya (Jọn 14: 2,3; na 1 Ndị Tesalọnaika 4: 13-18).
7. Anyị kwenyere na nzọpụta nke ndị mmehie site n'amara, site na nchegharị na okwukwe n'okwukwe zuru oke ma zuru oke nke obe nke Calvary nke anyị na-esite na ya nweta mgbaghara mmehie (Ndị Efesọs 2: 8-9; Ndị Hibru 9:12, 22; Ndị Rom 5: 11).
8. Anyị kwenyere na ọ dị mkpa ka e mee anyị baptism ime mmiri site n'imikpu na aha Chineke nke mgbe ebighi ebi iji mezuo iwu nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst (Matiu 28:19; Ọrụ 2: 34-36; 19: 1-6).
9. Anyị kwenyere na baptism na Mmụọ Nsọ dịka ezigbo ahụmịhe na ma ọ bụ na-esote nzọpụta, yana ihe akaebe Akwụkwọ Nsọ, ya bụ, ịsụ asụsụ dị iche iche dịka Mmụọ Nsọ si kwuo (Ọrụ 2: 1-4; 8: 14-17) Ndị Galetia 10: 44-45).
10. Anyị kwenyere na ọrụ nke onyinye na ozi nke Mmụọ Nsọ dịka e depụtara na 1 Ndị Kọrịnt 12-14 na Ndị Efesọs 4, dị ka ekpughere na Chọọchị mbụ.
11. Anyị kwenyere na ndụ jupụtara na Mmụọ Nsọ, ndụ nkewapụ site na ụwa na izu oke nke ịdị nsọ n'egwu Chineke dịka ịkọwapụta ezi okwukwe Ndị Kraịst (Ndị Efesọs 5:18; 2 Ndị Kọrịnt 6:14; 7: 1).
12. Anyị kwenyere na ọgwụgwọ nke ahụ site n'ike Chineke, ma ọ bụ ọgwụgwọ Chineke n'akụkụ ya dịgasị iche iche dị ka a na-eme na Chọọchị mbụ (Ọrụ 4:30; Ndị Rom 8:11; 1 Ndị Kọrịnt 12: 9; James 5:14) na site na nnaputa naha Jisos (Mak 16:17).
13. Anyị kwenyere na tebụl nke Onyenwe anyị, nke a na-akpọkarị Oriri Nsọ ma ọ bụ Nri Anyasị nke Onyenwe anyị, maka ndị kwere ekwe (1 Ndị Kọrịnt 11: 28-32; Matiu 26: 26-28).
14. Anyị kwenyere na Ekwensu na ụdị onye ọ bụ na ikpe ebighi ebi n'ime Ọdọ ọkụ maka Ekwensu na ndị mmụọ ozi ya (Matiu 25: 41; Mkpughe 20: 14-15).
15. Anyị kwenyere na ndụ ebighi ebi maka ndị kwere ekwe (John 5: 24; 3: 16), na ntaramahụhụ ebighị ebi maka ndị na-ekweghị ekwe (Mark 9: 43-48; 2 Ndị Tesalonaịka 1: 9; Mkpughe 20: 10-15).
16. Anyị kwenyere na ọ dị otu ezi Churchka bụ eluigwe na ala, nke ndị ezigbo kwere ekwe mebere, mana otu Churchka a zuru ụwa ọnụ bụkwa nke mejupụtara ọtụtụ Chka ụka dị na mpaghara nyere. Urcheska ndị a nọ n’okpuru ọchịchị nke Onye-nwe-anyị Jizọs Kraịst, na-egosipụta ọchịchị kwụụrụ onwe ya n’okpuru Ya, na-elekọta ihe omume ya niile na ozi ya, yana mgbasa ozi ọma (Ọrụ 15:22; Matiu 16:18; 18: 15- 20).
17. Anyị kwenyere na Ọchịchị bụ nke Chineke họpụtara, na ike ndị a na-ahọpụta ka ndị ozi nke Chineke nye anyị maka ịdị mma. Iguzogide ike na emume nsọ bu iguzogide iwu nke Chineke. Anyị anaghị edo onwe anyị n'okpuru ọnụma naanị n'ihi akọnuche kama kama n'ihi akọ na uche, na-enyefe ihe niile ruru ha, omenala nke ndị omenala, na-atụ egwu onye ọ na-atụ egwu, na-asọpụrụ onye ọ na-asọpụrụ. Anyị na-ekwupụta iguzosi ike n'ihe anyị nye Gọọmentị anyị na ndị isi ya, ma ga-enyere aka n'ụzọ ọ bụla o kwere omume, dabara na okwukwe anyị na akwụkwọ nsọ dịka ụmụ amaala Ndị Kraịst (Ndị Rom 13).
CHC nakweere usoro mmụta okpukpe na nke okpukpe dị ka ọtụtụ ụka Chọọchị P na China na Asia na US, yana nkwenkwe ndị na-adọrọ adọrọ / Pentikọstal. Nzoputa bu ihe nke ghoro nmekorita nke onwe onye nebe Chineke no, ma baptism ka edere nye ndi okenye ndi mere mkpebi nke n’eduba ngbanwe. Odido nsona bu nmekorita nke ndu na nkwenye na ebi ndu ohuru. N'ihe banyere nkwenkwe ya na nke Pentikọstal, CHC na-ekwusi ike, dị ka e kwuru na Nkwupụta Ozi ya, “baptism na Mmụọ Nsọ dị ka ezigbo ahụmahụ na ma ọ bụ na-esote nzọpụta, yana ihe akaebe Akwụkwọ Nsọ, ya bụ, ịsụ asụsụ ndị ọzọ dị ka Mmụọ Nsọ na-ekwu okwu, ”“ ọrụ nke onyinye na ozi dị iche iche nke Mmụọ Nsọ, ”na“ ịgwọ ahụ site n'ike Chineke. ”
Enwere nkuzi na ụkpụrụ dị iche iche dị iche iche nke ụka, bụ ndị na-ahụkarị maka ịdị iche nke ozi ya na uto ngwa ngwa na aha ya. Otu bu ihe ekwesiri ike na Cultural Mandate. Dị ka ihe atụ, na Nkwupụta Ozi nke chọọchị ahụ, a kpọtụrụ aha na ebumnuche chọọchị bụ “iwu ụka…. Irube isi na Commissionlọ Ọrụ Ukwu na Iwu Omenala.” Nke a gosiputara oke nkpa nke ozioma dika iwu ndi omenaala, ya bu, ikwusa ozi oma na iwu nke omenaala putara ibu nnu na ìhè n’azu ahia. N'ezie, ụka na-akọwa DNA ya dị ka Nnukwu Commission, Great Command me nt, na Cultural Mandate. Kemgbe afọ 2002, Kong bidoro izi ihe gbasara iwu ọdịbendị, na ọtụtụ nkuzi ya na okwuchukwu ya gbadoro ụkwụ n'echiche bụ na ndị kwere ekwe kwesịrị ịka mma n'ọma ahịa nakwa na ụka ekwesịghị ịhapụ onwe ya "n'ime mgbidi anọ" kama ọ kwesịrị tinye aka na uwa. Dị ka o kwuru n'otu n'ime ihe odide ya (Kong 2007):
Ka anyị kpebie ịdị mkpa maka ọha mmadụ. Anyị ekwesịghị ịtụ egwu itinye aka na ụwa nke Chineke kere ma hụ n'anya mgbe niile. Anyị ekwesịghị ịtụ egwu itinye aka na ọdịbendị site na ịbụ ihe okike, na-eme ọfụma, ma na-aga n'ihu dịka anyị nwere ike ịbụ maka ebube Chineke. Anyị ekwesịghị ịjụ sayensị na nka ebe ahụ n'ọma ahịa. Kama nke ahụ, anyị kwesịrị ịrụsi ọrụ ike na ịka mma na mpaghara ndụ Chineke kụrụ anyị. Ka ị na-eme nke ahụ, ị ​​ga-abụ nnu nke ụwa na ìhè nke ụwa. Mee elu mee ala, ị ga-akpọbata ọtụtụ mmadụ n’ala-eze Chineke!
Akwụkwọ akụkọ ọdịbendị ndị ọdịbendị na-elekwasị anya n'ụzọ bụ isi, dị ka e kwuru na weebụsaịtị ya, "ndị kwere ekwe bụ ndị nwere ihe ịga nke ọma n'ahịa azụmahịa na ụwa ntụrụndụ." Ọzọkwa, “ọtụtụ ndị ọchụnta ego na-eme nke ọma na ndị a ma ama achọpụtawo agụụ na-agụsi agụụ ike maka ihe ndị ha na-eme n’ụwa” ma “bụrụ ndị e si n’ike mmụọ nsọ na-eji ihe ha na-arụ” iji kwalite alaeze Chineke.
Ndụ Kong na nke Ho abụrụla ụdị nke ọma maka etu ndị kwere ekwe nwere ike isi tinye aka na ụwa. N'ihe odide ya "Choputa ebum n’uche gi na mba," Kong kwuru:
Anyanwụ na-enwe mmetụta na ụwa nke nka na ntụrụndụ. Eleghi anya n'ihi ọbara Indonesian-Chinese n'ime m, a dọtara m mgbe niile na azụmaahịa na ụlọ ọrụ ụwa. N'ime afọ ole na ole gara aga, ka anyị na ndị obodo anyị na-emekọrịta ihe dịka nnu na ìhè, anyị bidoro ịchọpụta ebumnuche anyị: nke abụghị ịbụ di na nwunye okpukperechi doro anya nke ejidere n'ime mgbidi anọ nke ụka ụka, kama iji were alaeze Chineke. banye n'ọma ahịa ọha mmadụ… Sun batara n'ọrụ ọrụ abụ ya wee bụrụ onye ọchụnta ego.
N'oge na-adịghị anya Kong na Ho malitere Usoro Mgbasa Ozi, nke gụnyere ịgbatị ma ọ bụ ịgafe na ọdịbendị ọdịbendị ndị ọzọ nke okwukwe Ndị Kraịst na-enwetaghị, na nke ha, "ọdịbendị pop". Ebumnuche Crossover ahụ chọrọ “ịgbapụta” ọdịbendị a ma ama site na ịnakwere, iji ya, na ịchịkwa ya dị ka ụzọ isi ruo ụwa, ma nwee olile anya, weghachite ya ka ọ bụrụ ụdị ọzọ nke Ndị Kraịst na ụwa (post) ụwa nke oge a . Site na nkwado siri ike nke Kong na nkwado nke ụka, Ho bidoro ọrụ egwu ya wee bụrụ otu n'ime ndị isi Mandarin pop nke Singapore. N'oge na-adịghị anya, Ho agbanyela ọtụtụ hits na egwu egwu Mandarin, rụọ egwuregwu juru na Taiwan, wee mepụta CD-platinum na-ere CD. Ka ọ dị ugbu a, dịka ọ ka na-eje ozi dị ka onye isi ụkọchukwu nke ụka ahụ, Kong kwụsịrị ịnata ụgwọ site na chọọchị ahụ wee dị ka onye nkịtị nke wepụtara onwe ya na chọọchị ahụ. N'ime nke a, ọ nweere onwe ya ịgafe n'etiti ụwa abụọ dị nsọ na nke ụwa. Kong bụ onye isi na Dr. David Yonggi Cho's Church Growth International (South Korea) na Dr. Luis Bush's Transform World (Indonesia). Ọzọkwa, ya na nwunye ya nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ, gụnyere International Harvest, Skin Couture, na ụlọ ahịa.
Uru ọzọ dị mkpa nke otu CHC bụ nke o mesiri ike "ịdị mma, ọganiihu, na ọganiihu." Ọganiihu nke ụwa, dịka CHC si lee ya, ọ bụrụ na ọ bụghị mgbe niile akara amara, bụ ihe na-egosi na mmadụ na Chineke na-aga n'ụzọ ziri ezi. Fọdụ nhota sitere n'ihe odide nke Kong gụnyere, "Mgbe mmekọrịta chiri anya gị na Chineke siri ike, mmekọrịta gị na ahịa ga-aga nke ọma." Kong kwuru, sị:
Gbalịsie ike banyere ya, Chineke chọrọ ka ụwa nweere anyị anyaụfụ wee sị anyị: “Anyị ga-enwerịrị ụdị ndụ ị na-ebi!” Ma, mmadụ ole n'ime ndị a na-amaghị iwu na-ekwo ekworo Ndị Kraịst taa? Kedu ihe kpatara na ndị ekweghị ekwe na-aga ọsọ ụka na ngwụsị izu ọ bụla, ma ọ bụ na-akụ aka n'ọnụ ụzọ anyị na-asị, "Nyere m aka, m ga-abata n'alaeze nke Chineke! Achọrọ m ịdị ka gị-obi ụtọ, ihe ịga nke ọma na ihe okike! ” (Kong 2007).
N’otu odide ahụ, Kong, n’eji ihe atụ sitere n’Agba Ochie, kpọtụrụ Adam aha, bụ onye “kọọrọ ala, kụọ mkpụrụ ya wee ghọrọ ihe ubi iji nye ezinụlọ ya nri, mana ọ kwụsịghị ebe ahụ. Ọ nyochara ọdịdị ala nke ala ahụ, gwuo ala n'ime ala, ma chọpụta ọlaedo na ụdị nkume dị iche iche. Ka ị na-agbasi mbọ ike, na-arụsi ọrụ ike, ị ga-aba ọgaranya na ndụ. ” E nwekwara Josef, “onye mere nke ọma na ọrụ ya nke na a buliri ya ịbụ nwoke nke abụọ nye Fero…” Ọzọkwa ndị Israel nọ, ndị Chineke mesiri obi ike na iwu Ya ga-eme ka ha "bụrụ ọgaranya na ndị bara ọgaranya. ” Mana, iji nwee ihe ịga nke ọma na ọgaranya, mmadụ kwesịrị igosipụta oke n'ọrụ ya.
N’otu n’ime edemede ya nke isiokwu ya bụ Excghọta Ezigbo, Kong setịpụrụ ụkpụrụ nke ịdị mma, nke ga - abụ "ịdị elu karịa, ịdị ukwuu karịa, ị gafee ọrụ gị, wee karịa onwe gị oge ọ bụla." A ga-egosipụta ụkpụrụ ọ bụghị naanị na ndụ ndị mmadụ, kamakwa na ọkwa ụlọ ọrụ. Ọ gbasoro ụkpụrụ nke kacha mma n'ịrụ ụlọ ụka "ọgbara ọhụụ" nke ọbụna ụlọ mposi "na-egosipụta ihe ụdị pụtara" (Oge Owuwe Ihe Ubi, v.18 July-December 2002) yana ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, nke dị n'etiti etiti mpaghara azụmahịa etiti Singapore na Suntec City Tower. Buildinglọ ọrụ ụlọ ụka ahụ bụ ngosipụta zuru oke ma pụta ìhè nke uru ọ bara, dị ka Kong kwuru na akwụkwọ ụka:
Nkọwa niile mara mma nke ihe owuwu ahụ dum dị ezigbo mkpa nye ndị isi ụka. Dị ọcha na ịdị ọcha, ahịhịa na nhazi ala, nhazi nke arịa anyị, nkasi obi nke oche anyị, atụmatụ agba na ọkụ nke ụlọ nzukọ anyị, ogo ikuku n'ụlọ, ọrụ agba, nhicha nke akara ọkọ, mkpisi aka na sawdust n'ime ụlọ ọrụ ahụ bụ nkọwa niile dị mkpa na-egosipụta ịdị mma (Oge Owuwe Ihe Ubi, v.17 Machị-June 2002).
Chọọchị enweela ihe ịga nke ọma n'inye ahụmịhe okpukpe mara mma na njirimara nke mkpokọta maka ndị na-eto eto na-aga ya, bụ ndị na-aga chọọchị na nke mbụ ma ọ bụ na usoro okpukpe ọdịnala agbanyụrịrị, site na ijikọta usoro ezi uche dị na ya, na-egosipụta mmetụta uche, na ụkpụrụ omume ndị ahịa na ọrụ Sọnde ya.
Chọọchị nwere ọtụtụ ọrụ, ahaziri n'asụsụ dị iche iche, na Sọnde ọ bụla. Iji hụ na ọrụ dị elu nke ọrụ ọ bụla, a na-ahazi ya nke ọma. Okwuchukwu ahụ, ọ bụ ezie na ndị ụkọchukwu dị iche iche kwusara ya, nwere otu isiokwu na isi okwu. A na-emekwazikwa ya nke ọma ma hazie ya. Dịka ọmụmaatụ, n'ihe banyere ijere Oriri Nsọ udo nye ọtụtụ puku mmadụ (onye ụkọchukwu na-agụghachi okwukwe nke Onyeozi ma na-ekpe ekpere ya, ọtụtụ narị ndị ushers na-agafe achịcha na iko mmanya, nke ọgbakọ na-eri ma tụfuo. spontaneously) niile na-emezu na nkeji.
A na-ejikọ ọrụ a mgbe niile site na ịtụ anya na ịnụ ụtọ, yana agba ya na-enwu gbaa, akara ngosi, ihe ọkụ ọkụ, na-enwusi ike n'elu ebe a, egwu na ịnụ ọkụ n'oge a na-aga site na nnukwu ọnụ ụlọ, yana egwu kwekọrọ ekwekọ, otu ndị otu egwu, na otu egwu. Gburugburu ya yiri igwe egwu egwu. Ọtụtụ puku mmadụ na-ege ntị na-ebili ọtọ, mgbe ụfọdụ na-eti mkpu ma na-awụli elu, oge ụfọdụ na-ebe ákwá ma gbuo ikpere n'ala.
Ime nkwusa bụ ihe ọzọ kacha amasị ndị ọrụ. A maara Kong dị ka onye e tere mmanụ na onye nkwusa na-ewu ewu, ma na mpaghara ma mba ụwa. Ọzọkwa, enwere ọtụtụ ndị na-asụ mba ụwa na-ekwusakarị ozi ọma na CHC. N'adịghị ka ụka ọdịnala, usoro ikwusa ozi ọma Kong nọ na-emetụta ihe okike. Okwuchukwu ya na-abụkarị ihe bara uru ma bara uru maka ndị na-eto eto na-ege ntị, a na-echetakarị ya ma na-akpali akpali mgbe niile. Nkwusa ya dịkwa na mmekọrịta chiri anya. Kama ịnọ na ikpo okwu, Kong ji olu obi ya, mmegharị ahụ, na akụkọ nke onwe ya na-agagharị na ndị na-ege ntị. Ọ ga - agbakarị ma ọ bụ gbaa ndị na - ege ntị ume ka ha zaghachi, dị ka ikwughachi ndị agbata obi ha okwu. E wezụga idetu ihe, ndị na-ege ntị na-egosipụtakarị nkwado ha ma ọ bụ nkwekọrịta ha site na ịza “ee” ma ọ bụ “Amen” ma ọ bụ akụ aka. N'oge ụfọdụ, mgbe nkwusa ahụ gachara, Kong ga-akpọ oku ma malite ọrụ ahụ n'oge oge ọgwụgwọ. Ọtụtụ narị mmadụ ga-asọba ebe a, ịnata ekpere, ọgwụgwọ ọrụ ebube na okwu amụma, na-emeghe mkpa mmetụta uche na nke anụ ahụ ha iji jee ozi n'ụzọ pụrụ iche na mkpokọta. Nkwusa ya, site na ọtụtụ mmemme telivishọn na ntanetị weebụ, eruola ọtụtụ nde ndị na-ekiri site na narị otu narị mba.
Dịka e kwuru, ụka na-ekwusi ike ụkpụrụ nke ihe ịga nke ọma na ịdị mma. Iji nwee ihe ịga nke ọma na ọrụ na ndụ, mmadụ kwesịrị ịnata ngọzi Chineke site na mmesapụ aka na-enye ụka. Omume a bụ akụkụ nke nkwenkwe na "ozioma nke ọganihu:" ya bụ, site n'inye Chineke ihe niile mmadụ nwere ike, Onye Kraịst ga-aghọrọ mkpụrụ nke itinye ego ya na nloghachi dị elu, ma n'ụzọ ime mmụọ ma n'ụzọ ihe onwunwe. Ejiri nlezianya dozie ọtụtụ ozi na echiche a, na akaebe nke ọtụtụ, gụnyere azụmahịa, agụmakwụkwọ, mmekọrịta mmekọrịta, egosila na ozi ahụ bụ eziokwu.
Na nkenke, site n'ụzọ nke "ofufe" kwesịrị ekwesị (mgbe a ga-eweli aka, ikpere, iti mkpu, wdg), oge "dabara adaba" nke ịza okwuchukwu ma ọ bụ onye ọ bụla nọ n'elu oche (ya bụ, ịkọwa, "ee" dị n'otu Nzaghachi mgbe onye nkwusa kwuchara ihe na-adọrọ mmasị ma ọ bụ ihe ịma aka), na onyinye ha kwa izu na kwa ọnwa, ndị otu na-enweta akara ngosi na-egosi ihe a na-atụ anya n'aka ha. Omume ịdọ aka ná ntị, nke ndị isi otu otu ma ọ bụ ndị ụkọchukwu na-eme iji dozie àgwà imekọ ihe ọnụ, abụghị ihe ọhụrụ. Enwere ike ịkatọ mmadụ maka ekwenyeghi na nkuzi ụka ma ọ bụ maka enweghị njikere isonye na ọrụ ụka, dị ka ọrụ ụlọ ụka. Dọ aka ná ntị siri ike ọbụna maka ụmụ akwụkwọ nke Traininglọ Ọrụ Ọzụzụ Bible. Dịka ọmụmaatụ, dị ka akwụkwọ ntuziaka nke ụmụ akwụkwọ ya si dị. 6.5.5., “Studentsmụ akwụkwọ kwesịrị ịkwanyere ndị ozuzu aturu na onye isi a họpụtara ha ugwu na nsọpụrụ na nsọpụrụ n’ebe Traininglọ Ọrụ Ọzụzụ Akwụkwọ Nsọ na CHC nọ. Studentsmụ akwụkwọ niile ga-akpọrịrị ndị pastọ niile aha ha mgbe ọ bụla ha zutere. Emeghị nke a ga-eweta ịba mba. ” Center a chụpụrụ ụmụ akwụkwọ iri na ise na 2004 n'ihi nsogbu ha nke "iguzosi ike n'ezi ihe na ịkwụwa aka ọtọ;" iri bụ ụmụ akwụkwọ mba ofesi (ọtụtụ bụ ndị ọrụ oge niile n'ụlọ ụka ha).
CHC [Foto dị n'aka nri] na-agba ọsọ dị ka ụlọ ọrụ etiti na otu Board of Director s nke na-ahụ maka iwu nke usoro iwu nke Chọọchị. Kong nọ n'ọkwá ndị isi, ya na ikike ime mmụọ na nke bara uru, na n'okpuru ya ka ndị ụkọchukwu ndị ọzọ a họpụtara ahọpụta na ndị ọrụ ugbo na-azụ atụrụ (e nwere ndị pastọ iri abụọ na abụọ na ndị ụkọchukwu ndị enyemaka na ndị ọrụ oge iri isii na ise) na ọtụtụ narị ndị isi ( ndị a bụ ndị isi, gụnyere ndị isi na ndị isi nke otu cell), na-esokarị ọgbakọ emekọrịta ihe. Mana ikike kachasịnụ bi na Kong. Dabere na Chan (na-abịa), ụka enweghị usoro ụka dị iche iche dịka ọ ka nọ n'ọgbọ mmepe. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ha na-aza ajụjụ banyere nhọpụta, ndị isi ụka gwara Chan na enweghị iwu ma ọ bụ ụkpụrụ a kapịrị ọnụ banyere onye a ga-ahọpụta.
Na-ekpebi site na nha na ọrụ chọọchị ahụ, ọ dị ka Kong gosipụtara ụdị onye ndu pụtara ìhè, nchikota nke ikike ma ikike mmụọ. Onye mbu gunyere ikike oru oma ya nke oma na echiche ya "ezi uche na nhazi", nke o kowara na ozuzu ya na Science Science. Na 2004, onye ụkọchukwu na-ahụkarị azụmaahịa wetara ụka nnukwu ọganihu site n'inweta ISO 9001: 2000, nke mere ya ụka mbụ na ụwa ka enyere onyinye dị otú ahụ. Nke ikpeazụ a gụnyere ọkpụkpọ nke ya sitere n'aka Chineke, nke ọ kọwara n'ụzọ a: Chineke “wee gwa m ihe doro anya, 'Kong, zụlite m ọgbọ ọhụrụ ga-ewere Asia buru iwe'.” Ọzọkwa, e nwere ọdịdị mara mma ya na nke ọhụụ, nke ọ na-eji "ma na-akpali ma na-agba ndị mmadụ ume ka ha rọọ nnukwu nrọ maka Chineke," na ụdị nkwusa ya, nke dịka webụsaịtị ya si kwuo, "ọgbara ọhụụ nke ukwuu" na "nwere oke ọchịchọ."
Hụ ọrụ nke ya ka 'ọ gbanwere ịbụ nke onye ọzụzụ atụrụ gaa n'ọhịa'Oge Akwụsị, Eprel 8 2004), Kong guzobere ụka na obere otu (cell) ma dabere na ndị isi nkịtị ka ha na-eme ihe omume oge niile. Dabere na akụkọ 2015 kwa afọ, ụka nwere otu cell cell 544, nke jikọtara mmadụ 10,825 na ibe ha, yana ndị isi otu otu narị na isii. E kewara ndị na-eto eto na ndị toro eto, a na-enwe nzukọ a kwa izu na-eso ihe ndị e mebere. Chọọchị ahụ na-enye ọzụzụ na ntuziaka zuru ezu iji mepụta usoro na-agbanwe agbanwe na nke ejiji na nkwusa, n'otu aka, na iji kwado ndị isi azịza azịza maka ajụjụ a na-ajụkarị, na nke ọzọ. N'otu aka ahụ, atụmatụ maka ndị otu (ọkwa atọ gụnyere ndị nkịtị, ozi, na onye isi ọrụ) ahaziri nke ọma.
Banyere mgbasa ozi ya, CHC na-ekwusi ike nha ma ọrụ izisa ozi na ọrụ mmekọrịta. N'ihe banyere ọrụ okpukpe ya, ma e wezụga ọrụ Sunday, ọ na-enye ọmụmụ Bible na klaasị / mmemme agụmakwụkwọ dị iche iche banyere okwukwe Ndị Kraịst n'ọtụtụ asụsụ na olumba s. Ndị ministri ahụ na-ekpuchi mmemme sitere na obere ụmụaka ruo ndị okenye, gụnyere ọrụ maka ndị ntị anụ ntị na ndị nwere mgbagha n'uche, ụlọ ụka izizi dị na Singapore bụ nke nyefere ihe enyemaka pụrụ iche maka otu a. CHC na-emekwa Schoollọ Akwụkwọ nke Theology maka ụmụ akwụkwọ mpaghara na ndị isi. Schoollọ akwụkwọ ahụ na-enye ọzụzụ maka mmụta okpukpe na nkuzi bara uru maka ndị isi Christian na ndị ozuzu aturu yana ndị kwere ekwe nkịtị. Site na 1994 rue 2015, ihe ọmụmụ ụmụ akwụkwọ jikọtara ọnụ ruru ụmụ akwụkwọ 6986. N'ime afọ 2015, Schoollọ akwụkwọ nwere ụmụ akwụkwọ 324, ọtụtụ n'ime ha si Singapore na China.
N'ihe gbasara ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, enwere otu ndị nwere onwe ha jikọrọ aka na CHC, bụ ndị na-arụ ọrụ dị iche iche: Citycare na-elekọta mmemme ọdịmma obodo na mba ụwa gụnyere ọzụzụ ụlọ ọrụ, na City Harvest Community Services Association na-elekọta ndị obodo ahụ. Enwere ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ nke ụka na-enye, dị ka City College, nke na-enye ụzọ agụmakwụkwọ ndị ọzọ maka ndị na-eto eto, O School nke na-enye ndị na-eto eto ọzụzụ ịgba egwu n'okporo ámá, na Little Big ụlọ akwụkwọ ọta akara nke na-akwalite agụmakwụkwọ nwata na-ekwusi ike na "okike, ngosipụta na nyocha."
Iji mee ka nzukọ ahụ na-aga nke ọma, ụka nwere usoro ezi uche dị na ya. Ọ na-esetịpụ ebumnuche ọnụọgụ maka ozi ọ bụla ma na-ekpebi ihe ịga nke ọma ya na nke ukwu, dị ka ọ pụta ìhè na akụkọ kwa afọ ya: “Anyị na-agụta ọnụ ọgụgụ n'ihi na ọnụọgụgụ!” Dịka ọmụmaatụ, na akụkọ kwa afọ nke 2015, ihe niile gbasara nnukwu ọnụọgụ: Ọ na-ekwu na ụka nwere ngụkọta nke mkpebi 6303 (nzọpụta na nraranye), nke gụnyere ndị okenye 2189 na ụmụaka 4114; Ndi mmadu 4107 ekpeela ekpere nke onye nmehie na nke mbu; E mekwara mmadụ 463 baptizim; na mmadụ 705 esonyela na njem njem 181 gaa obodo 87 na obodo iri na isii. Ọzọkwa, ụka nwere ụka jikọrọ 16 na ụka ụka 49 na China. Mkpokọta ndị bịara "CHC movement," gụnyere na "isi ụlọ ọrụ" ya na Singapore bụ 29. Nọmba ndị ọzọ gụnyere ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa, 49,032, nke ndị otu ọrụ enyemaka anọ ya hụrụ; ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke ndị gara nnọkọ mgbasa ozi nke 2933 ya nke ndị pastọ na ndị ọrụ CHC duziri, 386; ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ ya, 120,910; ya webcast viewership, 14,092,397; ndị na-eso ụzọ Twitter ya, 576,023; ndị na-eso ụzọ ya na Facebook, 18,036; ngụkọta nke nrụnye ngwa mkpanaka, 41,430; redio nke obodo ya oge niile na-agbasa ozi, nkeji 28,109; ọnụ ọgụgụ hits kwa izu, 25,710; were gabazie.
Asịrị metụtara ụka bụ nnukwu nsogbu ebere na Singapore akụkọ ihe mere eme ("City Harvest Church" 2019; Sin 2019; Tan 2019). O metụtara Kong na ndị isi ụka ise ọzọ na ndị isi ego ma ọ bụ ndị njikwa ego. Ego ego nke $ 50,000,000 Singapore ($ 35,000,000) bụ nke emezighị emezi iji kwado ọrụ egwu Sun Ho. Azụlitere mgbịrịgba dị iche iche tupu oge nyocha nke iwu, nke malitere na 2010. Na 2003, n'oge na-adịghị anya mgbe Ho malitere ọrụ abụ ya, otu onye ụka gara ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ebubo nke enweghị ego n'akụkụ ụka. Ma mgbe ahụ, ọ gbadara mgbaghara ma rịọ mgbaghara mgbe chọọchị ahụ yiri egwu ịgba ya akwụkwọ (Wong 2015).
Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, na May 31, 2010, Office nke Commissioner nke Charities na ngalaba azụmahịa nke ndị uwe ojii Singapore malitere nyocha ihe karịrị mmadụ iri na isii metụtara ụka, gụnyere Kong na Ho, mgbe ha natachara mkpesa. Ndị uwe ojii ahụ lere anya n'azụmahịa ego metụtara ụgha na ndekọ na-aga n'ihu na-emebi ntụkwasị obi, nke ha niile mere afọ ole na ole.
Na 2012, mgbe otu kọmishọna nke ndị ọrụ ebere tụlechara "omume na ezighi ezi n'ọchịchị," ejidere Kong na ndị isi ụka ise. N’ụlọ ikpe, ndị ọka iwu depụtara ebe nrụọrụ weebụ siri ike nke azụmahịa ego nke ndị isi ụka isii jiri $ 24,000,000 Singapore dollar ($ 18,900,000) si n’aka otu n’ime ụlọ chọọchị iji kwado ọrụ ịgba egwu Ho. Ho onwe ya etinyeghị aka na ebubo iwu. E nwekwara ebubo nke abụọ nke mmadụ isii a na-ewere $ 26,000,000 Singapore ọzọ ($ 20,500,000) iji kpuchie ego izizi mbụ. Mmadụ isii ahụ nọ na-arụ ọrụ ụfọdụ na bọọdụ ụka.
N’afọ 2015, mmadụ isii isii ahụ bidoro imebi ntụkwasị obi. A mara Kong nga afọ asatọ dị ka "onye isi" n'azụ mkparị ahụ yana onye duru mmadụ ise ya na mpụ mebiri ntụkwasị obi. Kong rịọrọ mgbaghara maka “mkpebi ndị amamihe na-adịghị na ha.” E nyefere mmadụ ise fọdụrụ mkpọrọ afọ dịgasị iche site na ọnwa iri abụọ na otu ruo afọ isii. A gbatịpụrụ ikpe ahụ ruo ọtụtụ afọ ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ mkpegharị. N’ikpeazụ, a belata ikpe Korea na afọ atọ na ọkara; o jere ozi afọ abụọ na ọnwa anọ. Na August 22, 2019, a tọhapụrụ Kong na nga. Ọ laghachiri na chọọchị ahụ ma ọgbakọ na-enwe ọ cheụ nabatara ya (Tan 2019).
Enweela nsonaazụ ogologo oge maka Kong na chọọchị ahụ..Na 2017, Kọmịshọna nke ndị ọrụ ebere amachibidoro Kong iwu ijide ọnọdụ njikwa ọ bụla na chọọchị ahụ ma ọ bụ ije ozi na kọmitii ya. Otú ọ dị, ọ na-anọgide na-eje ozi dị ka onye ndú okpukpe. Na mgbakwunye, Oge Akwụsị kwuru na ihe karịrị pasent iri abụọ na ise nke ndị òtù ahụ hapụrụ ụka mgbe akụkọ banyere asịrị ahụ gbawara na 2010. Na 2009, CHC nwere ihe dị ka ndị òtù 23,565 (dịka akụkọ ya kwa afọ), mana ọnụọgụ ahụ gbadara ruo 16,482 na 2015. Ka o sina dị, Owuwe ihe ubi City bụ otu n'ime ụka kachasị ukwuu na Singapore na Eshia.
Foto # 1. Foto nke Kong Hee, onye guzobere City Harvest Church.
Image # 2: Foto nke Ho Yeow Sun, nwunye Kong Hee, na onye ndu ugbu a nke City Harvest Church.
Foto # 3: Foto nke City Harvest Church.
Chan, Kim-kwong. Na-abịa. "City Harvest Church of Singapore: ihe ngosi mara mma nke Pentikọstal na ụwa Postmodern." Na Ihe Ndekọ Globalwa: Nbili na Mmetụta nke Charismatic na Pentikọstal Kraịst, nke Fenggang Yang, Joy KC Tong na Allan Anderson dere.
Cheong, Danson. 2015a. Arụmụka Banyere City Harvest Church “Ozi Ọma,” Oge Akwụsị, November 11. Nweta site na htts: //www.straitstimes.com/Singapore/controversy-over-city-harvest-churchs-prosperity-gospel na 10 May 2016.
Cheong, Danson. 2015b. Kong Hee "Isi Nwoke Na-akpata Nrụsị Churchka" Oge Nsogbu, Ọktọba 23. Nweta site na http://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/kong-hee-key-man-behind-church-scandal na 10 May 2016.
"Chọọchị Owuwe Ihe Ubi: Usoro iheomume nke ikpe kachasị na Singapore n'iji ọrụ ebere eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. ” 2019. Channel News Asia, August 22. Nweta site na https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/city-harvest-church-kong-hee-a-timeline-of-the-largest-case-11830638 na 10 / 1 / 2019.
Kong, Hee. 2007a. Chọpụta Ihe Nzube Gị na ularwa. Nweta site na https://kongheewiki.wordpress.com/2007/04/03/discovering-your-purpose-in-the-secular-by-kong-hee/ na 10 May 2016.
Kong, Hee. 2007b. Iwu Omenala anyị (Akụkụ 1). Nweta site na https://kongheewiki.wordpress.com/2007/07/03/our-cultural-mandate-part-1-by-kong-hee/ na 10 May 2016.
Miller, S. 2014. "City Harvest Church Investment Manager Chew Eng Han kwuru na Thatlọikpe na ọ rịọrọ onye guzobere Kong Hee mmasị iji debe ego nke Usoro Mgbasa Ozi Ezi uche." Oge Uzo, August 15. Nweta site na http://www.straitstimes.com/singapore/the-straits-times-news-in-a-minute-aug-15-2014 na 10 May 2016.
Sen, NG Jun. 2015. “Anyanwụ Whonye? Gịnị mere Sun Ho ji ghara ịgbaji US Market. ” Akwụkwọ Ọhụrụ, October 25. Nweta site na http://www.tnp.sg/news/singapore-news/sun-who-why-sun-ho-failed-crack-us-market na 10 May 2016.
Mmehie, Yuen. 2019. ”City Harvest onye nchoputa Kong Hee na-eme ya anya izizi na ulo uka kemgbe amachara na nga.” Nsogbu Oge, August 24. Nweta site na https://www.straitstimes.com/singapore/city-harvest-founder-kong-hee-makes-his-first-appearance-in-church-since-release-from-jail na 1 October 2019.
Tan, Theresa. 2019. “N’elu elu ya, o nwere mmadụ iri atọ na atọ mana ọnụọgụ ruru na 33,000 n’afọ gara aga; o nwere $ 16,000m na echebere na 132. ” Nsogbu Oge, August 25. Nweta site na https://www.straitstimes.com/singapore/city-harvest-fewer-followers-but-still-among-richest-charities na 1 October 2019.
Tong, Joy KC 2008. "McDonaldization na Mega-Church: Ihe Omume nke City Harvest Church na Singapore." Pp. 186-204 na Mgbanwe nke Okpukpe na Asia: Marketingre Chineke, nke Pattana Kitiarsa deziri. London: Ntughari.
Wong, Tessa. 2015. N'ime Ime Obodo Na-ewe Ihe Ubi nke Megachurch nke Singapore. BBC, October 21. Nweta site na http://www.bbc.com/news/world-asia-34589932 na 10 May 2016.